Ikhaya elithandekayo elipholileyo kwilali yaseBlockley - I-Airbnb
Ikhaya elithandekayo elipholileyo kwilali yaseBlockley
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguSimon
Wamkelekile kwiNombolo yesi-7 Mount Pleasant, ebekwe kwindawo ezolileyo embindini welali eyimbali yaseBlockley.
IBlockley, eyaziwa ngokuba 'yiGem eHidden of the Cotswolds', ibekwe ngokugqibeleleyo kwiindawo ezininzi zokuhamba ezisemaphandleni, kwaye ihlola iilali needolophu ezininzi zaseCotswolds. I-cottage isembindini welali, umgama wemizuzu emi-2 ukusuka kwindawo yentengiso yasekhaya, ivenkile kunye necafe (eyenza isidlo sakusasa esimangalisayo!)
Le ndlwana yezilwanyana zasekhaya ixhotyiswe ngokupheleleyo ukwenza indawo ethandekayo, ephumlayo!
Inani lesi-7 lilungelelaniswe kakuhle kwigumbi elinye lokulala, elineempawu ezininzi, kunye nenzuzo yegadi yentendelezo efanelekileyo kwisidlo se-alfresco! Ibekwe kwindlela ezolileyo enokufikelela kwabahambi ngeenyawo kuphela, kunye nemizuzu esuka entliziyweni yelali. Isimahla kwindawo yokupaka isitrato iyafumaneka.
Indlela emfutshane enqumla kwigadi yentendelezo ikhokelela kumnyango wangaphambili, ivula kwiveranda encinci ebiyelweyo, emva koko ungene kwigumbi lokuhlala elivulekileyo kunye nekhitshi elixhotyiswe kakuhle. Izinyuko ezikhokelela kwigumbi lokulala elikumgangatho wokuqala kunye negumbi lokuhlambela (enebhafu kunye neshawari eyahlukileyo).
Iibhedi ezintsha kunye neetawuli zikhona.
4.88 · Izimvo eziyi-174
IBlockley yilali yaseCotswolds yakudala, intle kwaye intle. Uninzi lwezakhiwo zaselalini zisukela ngeminyaka yoo-1800, kwaye ixesha elidlulileyo likaBlockley njengeziko lokuluka isilika. Ilali inee-pubs ezimbini, kunye nevenkile yoluntu kunye necafe.
Ilali imi ngokugqibeleleyo, kufutshane needolophu zaseCotswolds ezaziwayo zaseChipping Campden (iikhilomitha ezi-3.3), iMoreton-in-Marsh (iikhilomitha ezi-4), kunye ne-Stow-on-the-Wold (iikhilomitha ezi-7.5). I-Cheltenham kunye neStratford-on-Avon zombini ziphakathi kweekhilomitha ezingama-20. Zininzi iihambo ezintle ukusuka emnyango, kunye neendawo ezininzi ezintle zokutya ezikufutshane kakhulu.
I travel a lot for work and for fun. Wherever I go I take my running shoes. It’s a great way…
Ndiyakuthanda ukudibana neendwendwe xa ndifumaneka, nangona ndihamba kakhulu ngenxa yomsebenzi. Ndikwavuyile ukunxibelelana nge-imeyile nangefowuni.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Blockley